Nakatona-nosokafana-nakatona indray ny Dailymotion ao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2019 3:27 GMT
Ny hafatra hosoka “404” azo androany rehefa niezaka niditra ny Dailymotion.
Dailymotion, tranonkala fifampizaràna horonantsary mitovitovy amin'ny YouTube ao Frantsa no nakatona indray any Tonizia. Mbola tsy mazava raha ny sampana fehezin'ny fanjakana ATI (Agence Tunisienne d'Internet), izay iasan'ny mpamatsy tolotra aterineto rehetra ao Tonizia no nametraka ny fandraràna na tsia.
Ny 1 Aprily 2007, nosakanana saika nandritra ny herinandro ny Dailymotion tany Tonizia. Nanao tsoa-kevitra ny talen'ny fikarohana ara-teknikan'ny Citizen Lab, Nart Villeneuve izay nanaraka ny raharaha fa nakatona tokoa ny Dailymotion satria nosokajian'ny SmartFilter – rindrambaiko fanivanana novokarin'ny Secure Computing, orinasa amerikana ampiasain'i Tonizia – ho toy ny pôrnôgrafia: “Nosakanana izy satria nosokajian'ny SmartFilter ho toy ny sary mamoafady ny tranonkala, ary, hatramin'ny fanakànan'i Tonizia ny sokajy pôrnôgrafia, dia voasakana ny tranonkala. Fotoana teo anelanelan'ny 4 aprily 2007 sy 9 aprily 2007, nesorin'ny SmartFilter tamin'ny sokajy pôrnôgrafia ny dailymotion.com. “
Nanameloka ny fanakatonan'ny manampahefana Toniziana ny fidirana amin'ny Dailymotion ny Reporters Sans Frontières (RSF). “Ny fanakanana ny tranonkala www.dailymotion.com dia mety natosiky ny famoahana lahatsary maromaro momba ny toe-draharaha ara-politika any Tonizia”, ​​hoy ny fikambanana tamin'ny fanambarana nivoaka tamin'ny 3 Aprily 2007.
Tamin'ny 6 aprily 2007, taorian'ny fandraràna ny Dailymotion, nanomboka ny fanentanana “Sokafy ny Dailymotion” ireo bilaogera Toniziana sy mpikatroka mba hanasongadinana ny fandraràna tsy ara-drariny sy hisarihana ny sain'ny vahoaka amin'ny sivana mahery vaika manjaka ao amin'ny firenena.”